देउवाले फेरी नेतृत्व गरे भने पार्टी मात्र नभई देशै डुब्छ : सुजाता – Rastriyapatrika
rastriyapema | March 30, 2019 | Comments
नेपाली काँग्रेसभित्र यतिखेर चरम निराशा छ । गुटवन्दीको मारमा परेको काँग्रेस भित्रको विभाजन प्रष्टसंग सतहमा आउन थालेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘सभापति म नै पार्टी हुँ’ भन्ने शैलीमा हिडेको आरोप काँग्रेसकै कार्यकर्ताहरुले लगाउने गरेका छन् ।
यता कोइरालाको विरासत अर्थात नेतृत्वमा कोइराला परिवारको सदस्य नहुँदा उनीहरुमा पनि छटपटी बढेको छ भने धेरै कार्यकर्ताले यही छटपटीलाई अवसर बनाएर देउवाको शिरोच्छेदन गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिष्ट लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
कोइराला परिवारकै सदस्य सुजाता कोइराला स्वय पनि काँग्रेसमा नेतृत्वको विकल्प खोज्ने समय आएको बताउन थाल्नु भएको छ ।
पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको अभाव छ, जुन गतिले नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, पहिले पहिले जुन गतिमा अगाडि बढेको थियो, त्यसमा निक्कै कमी आएको नै हो ।
त्यसैले नयाँ नेतृत्व आउन आवश्यक रहेको छ भनिरहेका छौँ । नेतृत्व परिवर्तन अहिलेको नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता हो । यदि नयाँ नेतृत्व आयो भने कांग्रेसमा धेरै परिवर्तन आउँछ र पहिला जुन अवस्थामा थियो, त्यो भन्दा पनि अझ बलियो भएर आउछ ।
अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा नयाँ व्यक्ति जो आए पनि अहिले देउवा जीले चलाएको भन्दा राम्रो तरिकाबाट पार्टी चल्छ र पहिलाको तुलनामा कामहरु पनि हुदैँ जान्छन् यसमा म विश्वस्त छु ।
अहिलेको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु पुराना पनि हुनुभयो, अबको विश्व परिस्थिति पनि बुझेको आधुनिक तवरबाट नेपाली कांग्रेसको विचार बोक्न सक्ने व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको लागि आवश्यक छ ।
पक्कै पनि पछिल्लो समय पार्टी भित्र गुटबन्दी धेरै भयो हो, यसको न्यूनीकरणको लागि पार्टी सभापति लाग्नु पर्छ। उहाँ आफु मात्र नेता बनेर हुदैन । पार्टीभित्र अरु पनि जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ ।
उहाँहरुले पनि अवसर पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । कोइराला परिवारले कुनैपनि गुटको खेती गरेको छैन । यो सत्य होइन । अब हामीले कसैले कसैलाई भेट्न नै नहुने त होइन होला । प्रजातान्त्रिक मुलको पार्टी हामीहरुले एकको समस्या सुनेर अर्कोले समाधान गर्न सकेनौँ भने त हामी नेता कसरी हुन्छौ ? व्यक्तिलाई चिनाउनको लागि नेता बन्ने प्रचलन हावी भएको हो । हामी निराशा जनक भएर बस्नु हुदैन सकभर गुटको अन्त्यको लागि लागपर्नु पर्छ । म आफ्नो तर्फबाट लागिरहेको छु । अरु नेताहरु पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ ।
प्रतिपक्षको भुमिका निवाृह गर्नको लागि ठोस विषय हुनुपथ्र्यो त्यो नै भएन भन्ने कुरा छ ?
प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस कमजोर देखिएको कुरा सत्य हो । प्रमूख प्रतिपक्षी दल भएको कारण देशमा जुन ठूला समस्या, भ्रष्ट्राचार,बलात्कार जस्ता कुराहरु छन् । जुन कुराले समग्र देशमा रहेका समस्याहरुलाई बोकेका छन् त्यस्ता कुराहरुको सम्बोधन नभएको नै हो । सत्तापक्षी दलले जुन इस्यु उठाउछ त्यसको विरोध गर्ने काम मात्र गरेको हो । आफुले इस्यु दिने सकेनौँ अरुले उठाएको इस्युमा उभिएर आन्दोलन र विरोध मात्र गर्न थाल्यौँ । लिडरशिपको अभाव देखिएको हो । हामी आफहरुले इस्यु दिन सकेनौँ जस्ले गर्दा प्रतिपक्षीमा समस्या र कमजोर देखिएको हो ।
अब पार्टी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने छ । गुटबन्दीको अन्त्य हुने छ । सङगठनको निर्माणमा हामीहरु लाग्ने छौँ । अबको चुनावमा नेपाली कांग्रेस आउने गरी हामीले गृहकार्य गर्ने तयारी गर्नु पर्छ । लामो समयदेखि सालदेखि जनतामा लोकप्रिय र जनताको आशा लाग्दो पार्टी भएको पार्टी नेतृत्वको कमजोरीले चुकेको भए पनि तर फेरि आउँछ ।